Posted on 10 / 12 / 2019 by 阿斯劳 akanyora garari.
Uku kuchave kutarisisa kwakazara kwezvinangwa zveruzivo chete, haisi nzira yekutungamira. Izvi hazvireve kuti ndinoregerera mashandisiro aro kana kubvumidzwa kwekushandisa.
Kazhinji kusanzwisisika kana kusasanganiswa- kune mhando dzakasiyana dzeavaidhiids. Corticosteroids, iyo ine yakaipa-mhedzisiro Anabolic Steroids, Nechimwe chikonzero hachina kudhimoni nenhepfenyuro uye mashandisiro ayo anOGONESEKA muzviitiko zvakawanda- kusanganisira mitambo yehunyanzvi neyekudyidzana. Ivo anowanzo shandiswa kurwisa kuzvimba. Kune zvakare Progesterone iyo inoshandiswa mumhando dzakawanda dzekudzivirira kuberekwa uye inotorwa nemamiriyoni evakadzi mazuva ese. Anabolic steroids (pano inonzi AS kana AS) ndizvo zvinofungwa nevanhu vazhinji pavanotanga kunzwa "steroid" uye zvese zvakaipa zvinhu zvine hukama nazvo.
A) Testicular Atrophy- paunosimbisa yakawanda ye Testosterone HPTA yemuviri wako inotanga kuvhara (inomira kuburitsa Testosterone nekuti muviri wako uri kupora zvakanyanya kudarika zvakakwana); Muchidimbu izvi zvinokonzeresa kuti mabhora ako aderere. Kazhinji yenguva yacho haina kana kuoneka. Pamwe 25% kuderedzwa, 50% pane zvakanyanya. Paunenge iwe wabva kutenderera, mhanyisa yako PCT (Post-kutenderera kurapa) ivo vanodzoka kuzere-saizi. Hazvisi zvechigarire. Vamwe vanhu vanomhanya HCG (Yemunhu chorionic-gonadatropin) pavanenge vari kutenderera kuti vachengete mabhora avo akazara-saizi uye zvakare inobatsira mukudzosazve nekuti inochengeta ako leydig maseru achishanda.
B) mhanza / bvudzi-kurasikirwa: AS haina kukonzera mhanza kana bvudzi kudonha. Nekudaro, inogona kukurumidzisa maitiro. Kana bvudzi kurasikirwa kumhanya mumhuri yako, shamisika iwe kazhinji ungangozove mukoti wekumhanyisa maitiro aya. Bill Roberts akanyora nezvemhando mbiri dzakasiyana dzeSteroids- Type I uye Type II; Type I ndichiva main complements seTestosterone, Tren, Decca, Sust, nezvimwe uye Type II kuita kunge Winstrol (stanazolol), dbol, anavar, Masteron etc. Vanhu vazhinji vanopomera zvinodhaka seWinstrol uye Masteron Enanthate (Drostanolone) semunhu anokonzeresa kurasikirwa nevhudzi uye edza kunzvenga iwo madhiragi kana achishushikana neMPB, apo izvo zvisiri izvo- mhando ini ndinemhedzisiro yakatowanda paMPB (mhanza yemurume) kupfuura chero yemamwe marudzi emishonga. Uye zviripachena iyo DHT yakavakirwa mishonga (kunge deca) ichave yakaoma pane yako ganda. Nzira chete yekurwisa izvi ndeyokutora Finasteride (propecia / proscar) imwe yemaitiro erogaine mhando shampoos uye zvimwe zvinhu zvishoma.
C) Acne- vamwe vanhu vanobuda nezviso zvavo; vamwe vanhu vanobuda pachipfuva kana kumusana ... uye ganda revamwe vanhu rinobuda. Zvekare, munhu wese anobatwa zvakasiyana.
D) Ini ndinonzwa sekunge izvi zvaifanira kunge zvakavharwa pasi pey testicular atrophy uye ini ndongoita senge ndakanganwa. Nguva zhinji ini ndinonzwa vanhu vachitaura nezve AS vachiita kuti dick yako ishome, pavanenge vachireva mabhora ako. Saka, kujekesa, yako dick haina kudzikira uye izvo zvinoita nezve yakawanda pfungwa sekutaura kutora nasal spray kunodzora mhino dzako. Kana paine chero chinhu, neropa rakawanda richiyerera kuenda kunzvimbo iyoyo ini ndingati iwe unowanzo tenderera kune zvinopesana zvichiitika. Zvekare zvinoenderana nemakomponi aunotora- mimwe mishonga yakaita seDeca neTren inogona kuva nehasha pane rako libido (saka chirevo, "deca-dick") uye vamwe vakomana vakasarudza kutora Tadalafil (Cialis) (171596-29-5) kana viagra (haufanire kudaro) asi mimwe mishonga senge yakanangana neTest (chero mhando) kana dbol ichave iwe uchikwira madziro uye uchingotya se… .. Vasikana vazhinji vane murume kana mukomana pane kutenderera anoita kunge anonakidzwa nemurume wavo ari kutenderera, lol.
E) "Roid-hasha" - Iko hakuna chakadai chinhu. Zviri nyore sezvazviri. Kana iwe uri munhu asina kugadzikana, hongu, vari kuzoita kuti iwe uwedzere kusagadzikana. Asi zvekare, zvimwe zvinhu zvakawanda nemishonga zvinogona kuzokonzeresa izvo zvakare. Kana iwe usina kugadzikana mupfungwa kana kutowanikwa uine chirwere chepfungwa haufanire kufunga nezvekutora steroid. Ndinoshuva kuti zvakafanana zvingataurwa nezve doro. Ruzhinji rwevanhu harukanganisike neizvi. Vanhu vazhinji vanonzwa sekunge vari mune iri nani mamiriro kana vasina kana musiyano zvachose. Ndiri kuona vanhu pamwe vachitora cockier nekuti ivo vari vakati kurei uye zvishoma kusimba, asi kunze kweizvozvo, chero chinhu chinomhan'ara "roid-hasha" (hurumende institution kana kwete) ihorseshit.
Steroid haikonzeri kuti vanhu vafe kana kutungamira kurufu rwavo nekuda kwekumwe kupokana. Pakave pasina kuongororwa kwesainzi kunongedzera kwakanangana neanabolic steroid uye kufa. Vanhu vanonongedzera kuna Zyzz, asi ivo havanganongedze kunhoroondo yemhuri yake yechirwere chemoyo / mamiriro uye handifunge kuti chitunha chakamboitwa pachena? Kutora nhamba dzeCDC kubva muna 2005 kubva kuBigger Stronger Faster:
uye kufa kubva kuvanabolic steroid ……: 3
Ehe, kana steroid ikaitwa nenzira isiri iyo inogona kuve nenjodzi. Oral steroids (senge dbol, winstrol, anavar, nezvimwewo) vane hepatoxic uye inogona kuva nehasha pachiropa chako kana ikatorwa mumadosi akawandisa uye kwenguva yakareba yenguva… uye kana uchinwa doro uchiri pamhepo. Ichi ndicho chikonzero nei zvichikurudzirwa kuwana mapaneru eropa akaitwa pamberi, panguva, uye mushure mekutenderera Kutora zvinhu zvakaita semukaka rukato zvinogona kubatsira kurerutsa mutoro uri pachiropa chako.
Dzvinyiriro yeropa inogona uye inogona kuenda kumusoro, zvakare zvakanyanya zvichienderana nemakomisheni iwe aunotora (kunyanya Methandrostenolone (Dianabol) powder uye EQ). Kutora mbiriso tsvuku mupunga kunogona kubatsira kuchengeta cholesterol neBP mukutarisa. Ichokwadi chiri chinhu chinoda kuongororwa. Uye icho chikonzero chaicho nei iwe uchifanira kunge uchidya CHAKANAKA paunenge uri kutenderera- usiri kudya pizza, burger, uye fries.
Steroid iri kutora intramuscularly- kwete neropa. Iko hakuna kuputira bhandi kutenderedza ruoko rwako kana chero. Dai iwe waizobaya mutsinga kana tsinga inopera unogona kufa. Kune chaiwo majekiseni nzvimbo- akachengeteka ari mabhanhire, quads, glutes, uye iyo ventro-gluteal saiti. Vanhu vanowanzo funga kuti mbongoro / glute ndiyo saiti yakachengeteka, ini handibvumane nekuti zvakaoma kusvika uye nekuti sciatic nerve inomhanya padyo nenzvimbo iyoyo uye kana ukarova izvo, rombo rakanaka nehupenyu hwako hwese.
Steroid iri uye haisi chishamiso mushonga. Unogona kugara pasofa uchidya machipisi embatatisi uye pamwe wotokura, asi kana zvirizvo zvauchazoita kana uchizvitora, haufanire kutombonetseka nekuparadza mari yako. Iwe uchiri kufanira kuita basa racho. Zvichiri kufanira kudya zvakachena- ini ndaizoti kana yakachena. Kunyange zvakadaro unofanirwa kutarisa zvese.
Pro-mahormone haisi yakachengeteka-imwe nzira kune steroid sezvo uchigona kuitenga paGNC / Yakazara Nutrition / Kwese. Ivo vane ZVIMWE zvine njodzi uye kazhinji nguva iwe haugone kutenga chaiyo PCT zvinodhaka ipapo uyezve iwe uri mune chaiyo, yakaoma nzira yekudzoka- kana iwe uchipora zvachose. Saka vana vazhinji vakaguma paTRT kwehupenyu hwavo hwese nekuda kweizvi. Ini handinzwisise kuti pakange pasina sei mhosva mushure mematare edzimhosva pamusoro pezvitoro izvi.
Ko MK-677 (Ibutamoren) inoshanda mushe KuMuscle Kuvaka? Kudzokorora	Yakazara Yekutenga Nhungamiro YeSARM SR9009 Kuvaka muviri